बिहिवार, श्रावन २१, २०७८
भाद्र शुक्ल पक्ष, दशमी मी घ.३२ प.२ विक्रम संवत् २०७७ साल भाद्र १२ (२८ अगस्त, २०२०) शुक्रवार, नेपाल संवत् ११४०, प्रिती गरीजी मूल ।
न्यू अनलाइन खबर २०७७ भाद्र १२, शुक्रबार 2.19K
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर तीव्र रुपमा फैलिने क्रम बढेको छ । बिहीबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ११ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि झापा गोलीकाण्डको छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ । जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सुशान्त बराल छन् ।
चितवन । चितवनमा थप १७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । झापाको दमक–३ घर भएका ८३ वर्षीय पुरुष र मोरङको बेलबारी–५ की ५६ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो ।
जुम्ला । चिकित्सा शिक्षामा सुधार र सुशासनको मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले होटेलमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रहरीको अवरोधका कारण उनले एक साताका लागि सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । बिहीबारदेखि सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. केसीलाई जुम्ला सदरमुकामस्थित होटेलबाट प्रहरीले बाहिर निस्कनै नदिएपछि सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपालमा अब निजी प्रयोजनका लागि जहाज खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारले निजी जहाज आयात गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी नीति बनाएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समेटिएको छ । सरोकारवालाको राय लिएर पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको मस्यौदाअनुसार अब निजी तथा तालिम प्रयोजनका लागि एक इन्जिन भएको वायुयानको आयात र सञ्चालन गर्न पाइने छ । यसका लागि वायुयान उत्पादन गर्ने संस्थाले तोकेको इन्जिन परफरमेन्स, नियामक निकायले जारी गरेका शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।
भक्तपुर । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ गठ्ठाघरकी ६४ वर्षीया महिलाको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
ताप्लेजुङ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सदरमुकाम समेत रहेको पाँचथरको फिदिम नगरपालिका शुक्रबार बिहानदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ ।
काठमाडौ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा अनलाइनबाटै लिने भएको छ। दुवै तहका सेमेष्टरको मध्यावधि (मिडटर्म) परीक्षा अनलाइन माध्यमबाटै लिने भएको हो।
सिड्नी । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा सफलता पाइरहेको अस्ट्रेलियाको कृषि क्षेत्रमा बर्डफ्लुको संक्रमण देखापरेको छ । भिक्टोरिया राज्यका आधा दर्जन कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लुको प्रकोप देखिएपछि संक्रमित हजारौं कुखुरा तथा इमु मारिने समाचारमा जनाइएको छ ।
एजेन्सी । स्पानिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तामेउले कप्तान लिओनल मेसीले क्लब छाड्ने निर्णय बदलेमा आफूले क्लब छाड्ने बताएका छन् । मेसी क्लबमा रहने अवस्था आए बार्तामेउले आफू पद छाड्ने संकेत गरेको स्पानिस अनलाइन मार्काले जनाएको छ ।